Anastasiya Kvitkov (22) haagoni kushamisika kuti mamiriro ehutano hunonzi Kim Kardashian achiri kutaridzirwa somumwe wezvakanaka uye anoyemura munyika. Kutevedzera muenzaniso wake, nheyo yakaita kuti vakadzi vasingaverengeki vakure. Asi mutauro weRussia unoti ane dhongi rakanaka kwazvo, uye Kim haasviki kusvika kumakumbo ake.
Miviri yangu iri kutengeswa. Zuva rekushanda zvakaoma kuti uve nemasumbu angu pamuviri wangu. Hondo yangu ndiyo mbongoro yakanaka kwazvo munyika uye handina mapurogiramu epurasitiki asina kufanana nevamwe. Usiku, ndinorara pamudumbu wangu, naizvozvo huti yangu haigoni kurara, "akadaro nekumhanyisa muRussia, apo vamwe vanhu vakatanga kutora nhoroondo yake pane webhusaiti.
Russia, zvisinei, inotya kutaura kuti ichakurumidza kuva yakakurumbira kupfuura Kardashian pachake.